एप्पल प्यूरी - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
एप्पलसियस एक हो साथ मासु, roasts, खेल stews र cupcakes वा केक भर्न को लागी आदर्श। यो हाम्रो भाँडा र color र त्यो मीठो स्पर्श दिन को लागी एक तरीका हो।
गार्निशको रूपमा स्याउ प्युरीले हामीलाई तालुमा यसको राम्रो मिठाई स्वादको लागि भिन्नता प्रदान गर्दछ, थप हुनुको साथै स्वस्थ र प्रकाश फ्याटी खानाहरु संग बनेको एक चटनी भन्दा। को स्याउ तपाइँलाई थाहा छ, उनीहरु फाइबर, साथै भिटामिन र antioxidant पदार्थ संग पकवान समृद्ध। तेसैले यो हाम्रो क्रिसमस व्यंजन को केहि को लागी आदर्श संगत हो।
सबै भन्दा राम्रो, यो तयार गर्न को लागी सरल छ र धेरै बहुमुखी किनभने दालचीनी को एक स्पर्श संग यो एक स्वादिष्ट मिठाई हुन सक्छ।
1 एप्पल प्यूरी
यो एप्पल प्यूरी मीठो र मीठो बनाउने व्यंजनहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
खाना पकाउने समय: 21M
१००० ग्राम सुनौलो स्याउ वा पिप्पिन
हामी स्याउलाई बोक्राउँदछौं, कोर गर्नुहोस् र मध्यम टुक्राहरूमा काट्नुहोस्। हामीले तिनीहरूलाई पानी, कागतीको रस, नुन र खुर्सानी साथ गिलासमा राख्यौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी माखन र प्रोग्राम थप्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी हाम्रो खाना सँगसँगै चिसो वा चिसो सेवा दिन्छौं।
थप जानकारी - तोरी र स्याउ जाम
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, क्रिसमसको, Postres, साल्सास
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » साल्सास » एप्पल प्यूरी
नमस्ते सिल्भिया, यो सरल र व्यावहारिक नुस्खाको लागि धन्यवाद। मलाई थर्मामिक्सबाट स्याउ र स्याउ पाई मात्र मन पर्छ, तर म यसलाई मासु जस्तो चीजमा लागू गर्न कहिल्यै सकिनँ।
म यसलाई व्यवहारमा राख्दै छु।
म हरेक दिन तपाईंको ब्लग प्रविष्टिहरु लाई हेर्नको लागि प्रवेश गर्दछु। म काटिएको छु!
धन्यबाद, धन्यबाद र धन्यवाद
एस्टर, हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
पेपिता मार्ती गार्सिया भन्यो
नमस्ते सिल्भिया, हामी अभ्यासमा एप्पल प्यूरी राख्छौं, मलाई भाँडा माझ्न, स्याउ, मलाई भुनेको मन पर्छ, र त्यसैले म पनि सोच्दछु, यसलाई अभ्यासमा राख्नुपर्दा, धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि तपाईले देख्नुहुनेछ हरेक दिन तपाईं, म hooked छु, एक चुम्बन
पेपिटा मार्ती गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
यो प्युरी धेरै स्वादिलो ​​छ, पेपिता। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। एक वफादार अनुयायी हुनको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
नमस्कार फेरी, केटाहरू नराम्रोबाट, मैले तपाईंलाई भेटेर राम्रो पाएको छु मलाई व्यञ्जनहरू मनपर्‍यो मैले पहिले नै केहि लेखेको थिएँ र सबै भन्दा माथि तपाईं महान हुनुहुन्छ किनकी मैले केही महिनादेखि थर्मोमिक्स प्रयोग गरिरहेको छु र म अझै पनि एकदम डराएको छु यो र म यसलाई अधिक रूपमा तपाईं गर्न को लागी गर्न चाहन्छु, स्याउ को विचार मलाई मन पर्छ म यसलाई प्रयास गर्नेछु। चुम्बनहरू।
Sebeair लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई हाम्रो ब्लग Sebeair मनपर्दा मलाई खुशी लागेको छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
राजाहरूले धेरै बेर अगाडि थर्मामिक्स ल्याए र यस वर्ष उनीहरूले मलाई इलेक्ट्रिक कुकर ब्रान्ड माउलाइनक्स मिनेट कुक ल्याए। म फ्यूजन कुक किन्ने सोच्दै थिएँ किनकि यो बटनमा मासु, माछा इत्यादिका लागि दर्शाउँछ।
के तपाईलाई थाहा छ यदि मउलाइनक्सले उस्तै प्रदर्शन पाउन सक्छु?
माफ गर्नुहोस्, मैले लगभग बिर्सें, म एप्लसको साथ सफल भएँ, तिनीहरू सबैले यसलाई धेरै मन पराउँथे।
धेरै धेरै सिल्विया धन्यबाद।
म खुसी छु, मारिसा! शुभकामना।
नमस्ते मारिसा, मलाई माफ गर्नुहोस्, म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दिन, तर मलाई थाहा छैन यो के हो। मसँग फ्यूजन कुक पनि छैन। शुभकामना।
धेरै धेरै धन्यवाद !! म वास्तवमै यो प्यूरी बनाउन चाहान्थें, तर मँ यो नुस्खाको साथ आविष्कार गर्ने हिम्मत गरेन ... जब मसँग पाहुनाहरू छन्, म निश्चित रूपमा गर्नेछु!
जेसी, यो धेरै स्वादिलो ​​छ, तपाइँ पक्कै पनि यसलाई कुनै पनी सँगसँगै मनपर्नुहुनेछ।
नमस्ते केटीहरू, तपाईंलाई भन्नुहोस् कि मैले तपाईंको रोजकन डे रे बनाएँ र यो यस्तो सफलता थियो कि मेरो परिवारले मलाई अर्को दिनको लागि अर्को सोध्यो। धन्यवाद, थोरै चुम्बन।
म खुसी छु कि तपाईलाई यो मनपर्नेछ र अब तपाईले भनेजस्तै हामी हल्का चीजहरूबाट सुरू गर्नेछौं। शुभकामना
नमस्कार, किनकि मैले दुई दिनसम्म तपाईंको नुस्खा प्राप्त गरेको छैन, म तपाईंलाई जान्न चाहान्छु कि यदि तपाईंले अरू पठाउनु भयो भने।
नमस्ते मारिसा, हिजो हामीले भिचिसोइज प्रकाशित गरेका थियौं र छैठौं एपलस हेर्नुहोस् कि यो सदस्यता लिईएको छ किनकि सिद्धान्तमा तपाईंले उनीहरूलाई जहिले पनि प्राप्त गर्नु पर्दछ। मलाई भन
नमस्ते सिल्भिया, मैले तपाईलाई भर्खर देखेको छु र आज मैले स्याउ बनुलोस बनाउने कोसिस गरेको छु, तिनीहरू राम्रा छन् ... मैले उनीहरूलाई चिसो तातो सेवा गरिसकेको छु (मेरो साथी ब्रिटिश हो र त्यहाँ धेरै मिष्ठान्नहरू दिइन्छ)।
तपाईले उल्लेख गरेका सामग्रीहरूमा प्याज थपेर मँ मासुको लागि स्याउ प्यूरी बनाउँछु र यो उत्तम छ। म सामान्यतया प्याजमा स्याउको आधा वजन राख्छु यो कत्तिको बलियो छ, उपभोक्ताको स्वादमा निर्भर गर्दछ।
लोला, तपाईको सल्लाह को लागी धेरै धन्यवाद, के राम्रो विचारहरु !!
धन्यवाद केटिहरु, तपाईको व्यंजनहरु र प्रेमको लागि तपाईले राख्नु भएको छ, मैले १२ बर्षदेखि थर्मो पाएको छु, यस वर्ष मैले नयाँ किनेको छु र सारा दिन यो धुमिल हुँदै छ ... अभिवादन छ र यस्तै जारी राख्नुहोस्। आज म जाँदैछु। स्याउ जाम बनाउन,।
मानुएला क्लेभिजो फलहरू भन्यो
मैले तपाईको पृष्ठलाई लामो समयको लागि अनुसरण गरेको छु र मलाई तपाईको व्यंजनहरू साँच्चिकै मनपर्दछ। आज म सूप प्युरी दूधमा कम्मरको लागि गार्निशको रूपमा बनाउन लागिरहेको छु। छुट्टी छुट्टीहरू र २०१ year शुभ वर्ष।
Manuela Clavijo फलहरु लाई उत्तर दिनुहोस्
टुक्रा टुक्रा संग चेरी पाई